Ugu yaraan todobo qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan todobo qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
September 28, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Ugu yaraan todobo qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan todobo qof ayaa lagu dilay kadib markii qarax laga soo buuxshay gaari lagu qarxiyay boosteejada basaska oo kutaala Muqdisho maanta oo Khamiis ah sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah.
Intooda badan dadka dhintay ayaa waxay ahaayen dad rayid ah, sida ay sheegeen ilo-wareedku.
Ma jito cid sheegatay masuuliyada qaraxyadaas, balse xagjiriinta Al-Shabaab ayaa mar walba qaada weeraradaan oo kale.
Tirada dhimashada ayaa laga yaabaa in ay kororto, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
Caasimada Soomaaliya ayaa asbuucyadii u dambeysay ka nasatay qaraxyada dhimashada badan ee Al-Shabaab.
September 17, 2017 Sargaal katirsan ciidamada nabadsugida Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho
May 22, 2017 Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland oo sheegay in qaar katirsan Al-Shabaab loo wareejiyay Muqdisho ay baxsadeen